Famantarana 5 miatrika toe-javatra iray ianao + Inona no hatao manaraka - Fifandraisana
Famantarana 5 miatrika toe-javatra iray ianao + Inona no hatao manaraka
‘Situationship’ dia iray amin'ireo teny toa nipoitra tato ho ato…
… Ny dikany ambadika kosa dia efa an-taonany maro.
Raha tsy azonao antoka ny dikan'izany dia vakio hatrany ary hanazava ny zava-drehetra izahay, ao anatin'izany ny fomba hiatrehana raha mahita ny tenanao ho iray ianao.
Ka inona izany toe-javatra izany?
Ity dia sarotra iray raha ny amin'ny famaritana marina, satria ny fifandraisana sy ny fifandraisana rehetra dia tena manokana amin'ireo tafiditra amin'izany.
Amin'ny ankapobeny, na izany aza, dia mamaritra izany limbo hafahafa izany rehefa miaraka amina olona ianao fa tsy tena amin'ny izy ireo.
… Mampiaraka ianao ary miaraka, tsy miaraka fotsiny ianareo.
… Mety ianao ho irery , fa tsy nasianao marika aminy.
… Misy ny fahatsapana tafiditra ao, saingy mbola tsy noresahina.
… Tsy mieritreritra ny hisaraka ianao, fa mbola tsy niresaka momba ny ho avy miaraka.
Misafotofoto? Izahay koa!
Inona avy ireo famantarana ny toe-javatra iray?
Noho izany, avy amin'io fampidirana tsy dia mazava io, ahoana no ahalalanao raha sendra toe-javatra ianao?
Ireto misy famantarana vitsivitsy tokony ho tadiavinao…
1. Mety. Ho azy ireo.
Matetika ny fizotran'ny toe-java-misy dia mankafy olona iray mihoatra ny iray hafa.
izy ireo afaka mahaiza mifanasoa, fa matetika izy ireo dia mety kokoa amin'ny olona iray ary, raha mamaky an'ity ianao dia mety tsy ianao no olona.
Ho an'ny olona sasany, manolotra ny firaisana ara-nofo amin'ny fifandraisana tsy misy fanerena fanoloran-tena izy ireo.
Izay no mety ho toe-javatra mety indrindra ho an'ny olona mankafy miaraka amina olona iray, nefa tsy te hilalao an-tsaha.
Mety ho faly izy ireo miaraka amin'ny olona iray fotsiny nefa tsy mila manisy marika na inona na inona.
2. Tsy misy marika.
Tsy misy mihitsy.
Tsy mariky ny fahatsapan'ny olona roa foana izany, satria mety hisy fihetseham-po mahery vaika sy fifandraisana akaiky na eo aza ny toa tsy fanoloran-tena.
Mety tsy hifampiantsoana hoe ‘sipa’ na ‘sipa’ ianao, saingy midika izany.
3. Tsy tena mifamatotra ny fiainanao manokana.
Matetika mitranga izany amin'ny andro voalohan'ny mampiaraka, satria mety ho sarotra ny mitsara rehefa tena mitondra olona amin'ny fiainanao ianao.
maninona no tsy asainy mivoaka aho
Mbola mandany fotoana miaraka ianao ary mankafy ny fitsangantsanganana, tsy tafiditra ao anatin'ny fiainam-piarahamonina hafa fotsiny ianao.
Tsy midika izany fa tsy izy ireo te hampahafantatra anao ny namany na ny fianakaviany dia mety hidika izany fa mbola tsy fotoana mety izao.
4. Eo amin'ny fijanonana ianao.
Raha ny tena izy dia tsy miresaka ianao misaraka , fa ianao koa tsy miresaka momba ny ho avy.
ny fomba hialana lolompo amin'ny fanambadiana
Averiko indray izany limbo izany!
Ny fiantraikan'izany dia tena miovaova amin'ny olona, ​​satria ny sasany mahita fa tena sarotra ny miatrika azy ary ny hafa kosa faly mandray azy isan'andro.
Averina indray fa tsy taratry ny fahatsapanao ny tsirairay avy izany fa ny fomban'ny zavatra fotsiny.
5. Mihidy izy io, nefa misokatra.
Tsy mahita olon-kafa ianao, fa tsy tena miaraka amin'ny daty tena izy ihany koa.
Mety hoe mifankahita amin'ny alina fotsiny ianao na rehefa samy somary mankaleo ary very antoka amin'ny drafitra hafa.
Mety ho mora ho anao roa io, mazava ho azy, fa famantarana izany fa tsy mpitovo ianao, nefa koa tsy mifangaro!
Tena tianao ve izany?
Ankehitriny rehefa nametraka ianao fa amin'ny toe-javatra iray dia tonga ny fotoana hampiasana ny fahatsapanao izany.
Mety efa fantatrao ny toe-javatra, na mety efa nahatsapa fotoana fohy ianao!
Zava-dehibe ny manamarika fa tsy miiba ho azy izany ary tsy foana ny hiafaràn'ny fifandraisanao amin'ny olona iray.
Ity dingana limbo ity dia mitranga amin'ny fifandraisana marobe mandritra ny fanombohana kely.
Mila miasa ianao raha faly amin'ny fomban'ny toe-javatra na raha tianao hivoatra amin'ny zavatra bebe kokoa.
Betsaka ny olona no faly amin'ny karazana fanoloran-tena an-tsokosoko azon'ny toe-javatra atao.
Azonao ny sombin-javatra mahafinaritra (mifampitantana, mandefa hafatra an-tsoratra mahafatifaty, ary mahafinaritra ny mandany fotoana miaraka amin'ny olona iray) nefa tsy misy ny fanoloran-tena na fanerena hoe 'miaraka.'
Ho an'ny olona sasany, ity dia mihoatra noho ny ampy ary tsy ilaina na maniry izany intsony.
Izany dia mitovy amin'ny fitsangatsanganana amin'ny fialantsasatra - misy ambaratongam-pihavanana, saingy tsy misy ianareo manery azy hanao zavatra hafa.
Ho an'ny hafa, ity dingana ity dia mety tena tsy mahavita ary tena mety fitaintainana .
Raha manantena ianao fa hivoatra amin'ny fifandraisana ny raharaha, dia mety ho sarotra be ny fotoana fiandrasana.
Tsy fantatrao izay hijoroanao, tsy azonao antoka inona ny fetra (azonao atao ve ny mihazona tanana eny imasom-bahoaka ary ahoana ny fomba fampidiranao azy ireo raha mifanena amin'ny olona fantatrao ?!), ary avela hahatsapa ho somary tsy milamina ianao.
Mety manontany tena ianao hoe maninona izy ireo no tsy te hanao zavatra ofisialy aminao, fa manandrana milalao azy milay ianao fa tsy ho 'ilay zazavavy / bandy' izay maika ny zavatra ary mametraka ny tsindry haingana loatra!
Fambara tsy fantatra 10 Misy olana momba ny fanoloran-tena
12 Famantarana fifandraisana iray vita fanoloran-tena (+ zavatra 6 midika ho anao izany)
Fahasamihafana 7 lehibe eo amin'ny filan'ny nofo sy ny fitiavana
6 Fahasamihafana lehibe eo amin'ny fitiavana olona iray sy ny fitiavana
Inona no ataonao izao?
Raha faly ianao amin'ny toe-javatra, ary mieritreritra ny olon-kafa koa ianao, tohizo.
Tsy misy mahamenatra ny fananana izay hitan'ny olona sasany ho fifandraisana tsy mahazatra raha samy mankafy azy ianao.
FA… raha mahatsapa tsy mahazo aina ianao dia mila miresaka momba izany.
Eny, mety te hiseho ho tsy miraharaha sy tsy mpihira ianao, fa raha mihinana anao io ary tsy afaka mankafy zavatra tsara, dia mila miresaka misokatra ianao.
Miezaha tsy ho be fihetseham-po be loatra rehefa mitondra an'io ianao - tsy ratsy ny manana fihetseham-po, fa mety ho mahery vaika, indrindra raha tsy manantena ny hitranga ilay resaka amin'ny voalohany!
Vakio hatrany ny torohevitra vitsivitsy momba ny fitondrana zavatra any amin'ny sehatra manaraka, ary inona no hatao raha mahatsapa ianao any dia tsy misy ambaratonga manaraka…
Tsy manana fitiavana aho amin'ny fiainana
Ahoana ny fomba hivoahana amin'ny toe-javatra mankany amin'ny fifandraisana.
Ny manapa-kevitra fa mila bebe kokoa amin'ilay olona miaraka aminao ianao dia mety hahafinaritra, fa mety hampatahotra ihany koa raha tsy azonao antoka ny zavatra tsapan'izy ireo.
Misokatra sy mahitsy amin'ny fifandraisanao, fa aza diso tafahoatra!
Misy fomba hiresahana momba izay tadiavinao nefa tsy maneno toa ny hoe manolotra fanambadiana sy trosa arahin'antoka ianao.
Azonao atao ny manomboka amin'ny firesahana ny amin'ny fomba ianareo mahatsapa.
Ho an'ny rehetra fantatrao, mety ho toy izany koa ny fihetseham-pony ary mety ho saro-kenatra loatra ny hanonona azy raha sanatria ka lavina izy ireo.
Ataovy ho be herim-po ary lazao azy ireo fa mankafy mandany fotoana miaraka amin'izy ireo ianao ary tsy liana amin'ny mampiaraka olon-kafa amin'izao fotoana izao.
Jereo ny valintenin'izy ireo ary tohizany raha mahatsapa fa tsara izany hatreto.
Azonao atao ny milaza fa te-hitsidika galerie ianao na hankany amin'ny toerana antoandro tianao indrindra amin'ny fotoana ahitanao azy ireo - ity dia fomba fikojakojana ambany, fomba tsy andaniam-potoana miaraka amin'izy ireo amin'ny antoandro.
Raha tianao izany dia lazao fa misy vondrona sakaiza iray misotro zava-pisotro amin'ny faran'ny herinandro raha maniry hiditra izy ireo.
Ity dia ampahafantarinao azy ireo fa tianao izy ireo mba hirotsaka bebe kokoa amin'ny fiainanao nefa tsy apetrakao mivantana ny tsindry.
Miankina amin'ny fandehan'ny raharaha, afaka manomboka manao drafitra lehibe kokoa ianao amin'ny fotoana atsy ho atsy.
Aza manomboka manomana enim-bolana mialoha, fa ataovy mazava tsara fa toa izy ireo ho toy ny fiasa matanjaka tsara eo amin'ny fiainanao ary sary an-tsaina azy ireo mbola manan-danja aminao izy ireo ao anatin'ny herinandro vitsivitsy.
Averina indray fa tsy fanoloran-tena izany, toy izany, fa mampiseho fahalianana.
Izany rehetra izany dia hitarika anao handany fotoana bebe kokoa miaraka amin'ny toerana akaiky kokoa.
Aza adino fa ny fifanakaikezana dia tsy fanorohana sy fihazonana tanana fotsiny - matetika dia ny fandraisana anjara tsotra fotsiny amin'ny fianan'ny tsirairay sy ny fanajana ny fisian'ny olona iray.
Azonao atao ny mampiseho fa mikarakara amin'ny fomba kely eny an-dàlana ianao (mandefa hafatra ho azy ireo rehefa fantatrao fa efa nivory lehibe izy ireo na nisy zavatra nahafinaritra nitranga) ary mety hanomboka hanao izany koa izy ireo.
Arakaraka ny maha-tafiditra an-tsehatra amin'ny fiainan'ny tsirairay avy no vao manomboka hahatsapa izy ireo fa natao ho zavatra bebe kokoa na hoe te-hihemotra izy ireo.
Raha tsy tsapan'izy ireo izany dia ity no ataonao mba hahamora ny fiainanao…
Rahoviana no handeha lavitra.
Ny fahalalana hoe rahoviana no hiantsoana azy io ho andro dia sarotra tokoa amin'ny lafiny maro amin'ny fiainantsika, manomboka amin'ny famaranana ny fisakaizana misy poizina ka hatramin'ny fialana amin'ny asa izay mampijaly antsika.
Ny fialana amin'ny fifandraisana, na ny toe-javatra, tsy manatanteraka anao tsy misy hafa.
Raha efa nataonao ireo dingana etsy ambony ary manomboka izy ireo sintonina , aza terena.
Tsy tokony hanery na hamitaka olona te hiaraka aminao ianao!
Na dia mandeha aza izy io, dia hahatonga anao tsy hatoky tena raha mijanona miaraka amin'izy ireo ianao ary manohy amin'ny toe-javatra…
inona no holazaina amin'ny namana mandalo fisarahana
… Mety hahatsapa ianao fa tezitra aminao izy ireo amin'ny fiezahana hamorona bebe kokoa amin'izay anananao, na mety hahatsapa ho tsy mahazo aina ianao rehefa mifanakaiky amin'izy ireo rehefa mahatsiaro ho voatsipaka kely ianao.
Na izany na tsy izany, tonga ny fotoana handehanana ary hamela irery ny zavatra.
Mety hanova ny sain'izy ireo izy ireo rehefa nanana toerana niainana sasantsasany, saingy, amin'izao fotoana izao, dia famantarana fa mila mandroso ianao!
Aza miandry mavitrika azy ireo ary mametraka ny zavatra hitazomana amin'ny fotoana tsy ampoizina fa hanova ny sainao izy ireo, fa apetraho amin'ny taratasy fisakaizana ny zavatra mba hahafahanao ho sivily raha mifankahita manodidina.
Raha mila fanoloran-tena bebe kokoa ianao ary tsy tafiditra amin'izany izy ireo, dia famantarana fa tsy mety aminao izy ireo.
Mety ho sarotra be ny hanaiky fa ny olona tianao dia tsy maniry zavatra mitovy aminao, fa tsy faran'izao tontolo izao.
Mbola azonao atao ny mijery azy io am-pitiavana ary mahita azy io ho lesona.
Azo antoka, mety mitaky tomany kely sy resaka marobe amin'ny namanao ianao, saingy ho tonga amin'ny sehatra hahitanao toerana ho an'ny fitomboan'ny tena manokana.
Tamin'ny faran'ny andro dia nandà ianao tsy hipetraka amin'ny zavatra fantatrao fa tsy mety aminao ary tokony hirehareha amin'ny tenanao ianao amin'izany.
Ny iray amin'ireo zavatra mampalahelo indrindra dia ny hoe rehefa mandray kely noho izay tadiaviny (sy mendrika) ny olona, ​​ary izany fanapahan-kevitra izany dia atosiky ny tahotra foana - tahotra ny holavina na tahotra ny ho irery.
Na izany na tsy izany, amin'ny fangatahana izay tadiavinao sy fandehanana miala rehefa tsy mety izany, dia sahy be ianao ary mametraka ny tenanao ho lohalaharana - ary izany no karazana fitiavana heverinay fa tsara indrindra.
Mbola tsy azonao antoka ny fomba hanatonana ilay toe-javatra hitanao fa misy anao? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
rehefa mifankatia amina lehilahy manambady ianao
ny fomba fanaovana zavatra tsy tianao atao
inona no dikan'izany rehefa marary ny fonao rehefa malahelo olona iray ianao
ahoana no tsy hitenenako be loatra